May 6, 2021 - ApannPyay Media
May 6, 2021 by ApannPyay Media
သင်ကြွက်တက်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ဒီဆေးနည်းလေးမှတ်ထားပါ မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ညဆိုကြွက်တက်တတ်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ဆိုပြီး မေးလာပါတယ်။ ကြွက်တက်တယ်ဆိုတာ အသက်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့ တောင့်တင်းနာကျင်တဲ့အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ခြေသလုံးနေရာနဲ့ ဒူးခေါင်းရဲ့ အနောက်ဘက်နေရာကကြွက်သားတွေ တအားနာကျင်လာတတ်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါ။ စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြာတတ်ပြီး တချို့လူတွေမှာ ၁၀ မိနစ်လောက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြွက်တက်ပြီ ဆိုရင်တော့ အိပ်စက်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီပေါ့။ အေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တတ်သလို ၊ခြေ၊လက်ကို အညောင်းဆန့်ရာကနေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ အားကစားလုပ်ရင်းကြွက်တက်တတ်ကြပါတယ်။ ကြွက်သားကိုအလွန်အကျွံ သုံးမိတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တာကြောင့်လည်း ကြွက်တက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ရေများများသောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ညဘက်မှာ ကြွက်တက်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခြားသောရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဆက်စပ်ပြီးကြွက်တက်တတ်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ကြွက်တက်တဲ့ဝေဒနာကိုဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲဆိုရင် ခြေထောက်ကို ကွေးကောက်နေတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ သေချာဆန့်တန်းပြီး အိပ်ပါ။ ခြေတောက်မအေးအောင်ဂရုပြုရပါမယ်။ … Read more
စားအသောက်တွေမှာ ဖော်မလင် ပါ၊ မပါ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ..? ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ… ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Q. ဖော်မလင်အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ဆိုတာ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (formaldehyde)၊ မက်သနော (methanol)၊ ရေ (water) စုပေါင်းထားတဲ့ အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖော်မလင်အရည်မှာ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါ၀င်ပါတယ်။ Q.. ဖော်မလင်ကို သဘာ၀အားဖြင့် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ကို အဓိကအားဖြင့် လူသေတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် စိမ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ … Read more
ကျောက်သင်ပုန်းတချပ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ် ထင်လား ကျောက်သင်ပုန်းတချပ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ် ထင်ရင် မှားမှာပေါ့…တပုံချင်းကြည့်ပြီးလေ့လာစေချင်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်(ဘီလူးကျွန်း)၊ မုဒွန်းကျေးရွာ၊ ကျောက်သင်ပုန်းတောင်မှ ကျောက်သင်ပုန်းကျောက်တူးဖော်ပုံနှင့် ကျောက်သင်ပုန်းပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်… တချို့ ကျောက်သင်ပုန်းသုံးတဲ့သူတွေက လွယ်လွယ်သုံးပြီး တန်ဖိုးမထားတတ်ကြတာ လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းလေးတစ်ချပ် ဖြစ်လာဖို့အတွက် အသက်တွေ ချွေးတွေရင်းပြီးလုပ်ကြရတာပါ။ ကျောက်သင်ပုန်း(tablet)နှင့် ကျောက်တံ(pen)များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဦးအောင်သိန်း ဆိုသူသည် မုဆိုးမတောင်မှ စီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းရှိကျောက်ပြားများကို ကောက်ယူပြီး သံပြားနှင့်ခြစ်ကာ မြန်မာ့ tablet ကျောက်သင်ပုန်းကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စက်မပေါ်သေး၍ လက်ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ကျောက်သင်ပုန်း (tablet) ၅ချပ်သာပြီး၏။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့်တစ်ခြားသူများလည်း ယင်းကျောက်မှ ကျောက်သင်ပုန်း(tablet) ပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရှိလာကြသဖြင့် မည်သူမဆို မိမိကြိုက်သည့်နေရာတွင် ကျောက်များကို … Read more
ကျောက်ကပ် နှလုံး အသည်းရောဂါတွေတောင် ပျောက်စေတဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်
ကျောက်ကပ် နှလုံး အသည်းရောဂါတွေတောင် ပျောက်စေတဲ့ ကင်ပွန်းချဉ် “ကင်ပွန်းချဉ်ရဲ့အံ့မခမ်း အစွမ်း ဒီလောက်စွမ်းမှန်း ခုသိရပြီဗျာ” ကျောက်ကပ် နှလုံး အသည်းရောဂါတွေတောင် ပျောက်စေလို့ သိမ်းထားပါ ပူပြင်း ခြောက်သွေ့သော နွေကာလနှင့် လိုက်ဖက်သော အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်း အစာ တစ်မျိုးမှာ ကင်ပွန်းချဉ် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသူ အတွက် အာဟာရဖြစ်ပြီး မကျန်းမာသူ အတွက် ဆေးဝါးဓာတ်စာ ဖြစ်သည့် ကင်ပွန်းချဉ်ကို အဖိုးနည်းဝန်ပါ သူသူငါငါ လွယ်ကူစွာ စားသုံး နိုင်သည်။ ကင်ပွန်းချဉ်ပင်သည် နွယ်ယောင်ပင်ယောင်ချုံပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသော ပင်စည်နှင့် အရွက်တံတို့တွင် ဆူးရှိသည်။ အခက်စိမ်းများ၌ နီမှိုင်းမှိုင်း အရောင်အဆင်း ရှိသည်။ အရွက် သေး ငယ်ပြီး ရွက်ထိပ် ဝိုင်းသည်။ အသီးမှာ သီးတောင့်ရှည် မျိုးပြား၍ … Read more
ဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် ခေါင်းအုံးကို သန့်အောင် ဂရုစိုက်နော် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကိုယ်မသိလိုက်ခင်မှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်ရဲ့ ဆံပင်နဲ့မျက်နှာအသားအရေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ တကယ်လို့ ဒီလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ခေါင်းအုံးကြောင့်ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ (၁) ဝက်ခြံတွေပေါက်လာတယ် သင့်မျက်နှာမှာ တခြား ထွေထွေထူးထူး အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဝက် ခြံ တွေတအားထွက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ခေါင်းအုံး နဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ် ညစ်ပတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်တဲ့ခေါင်းအုံးဟာ ပါးပြင်ကို ထိကပ်တဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေကနေတစ်ဆင့် ဝက်ခြံဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အရေးကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ် သင်အိပ်တဲ့ပုံစံ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းအုံးစွပ်က သင့်မျက်နှာမှာ အရေးကြောင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်ဟာ သင့်မျက်နှာကို ပွတ်ဖန်များလာတဲ့အခါမှာ အရေးကြောင်းတွေဖြစ်သွားတာပါ။ (၃) ဆံပင်တွေ … Read more
ငွေဝင်ယတြာ လိုအပ်သော ပစ္စည်း များ ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချက် ကျောက်စရစ်ခဲအချော(9)လုံး ဂျင်းတက်အနည်းငယ် ဖယောင်းတိုင် အစိမ်း ရေအေးအေးအနည်းငယ် ယတြာပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ပထမဆုံးကြွေပန်ကန်ပြားထဲတွင်ကျောက်စရစ်ခဲ ၉ခဲဲကိုစုပီးထည့်ပါ ကျောက်စရစ်အပေါတွင်ဂျင်းတက်တင်ပါ ကျောက်စရစ်မြုပ်သည့် အထိရေကိုထည့်ပါ ဂျင်းတက်ပေါတွင်ဖယောင်းတိုင်းအစိမ်း ကိုထွန်းပီးဆုတောင်းပါ ပိုပီးထိရောက်၍အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ် တပက်အတွင်းငွေကြေးနှင့်ပက်သက်ပီးအဆင်ပြေလာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တွေ့အသုံးပြုပီး ဖြစ်သည်- အောက်တွင်ပုံနှင့်တကွပြုလုပ်ပုံကိုပြထားပါသည် ေငြဝင္ယၾတာ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း မ်ား ေႂကြပန္းကန္ျပားတစ္ခ်က္ ေက်ာက္စရစ္ခဲအေခ်ာ(9)လုံး ဂ်င္းတက္အနည္းငယ္ ဖေယာင္းတိုင္ အစိမ္း ေရေအးေအးအနည္းငယ္ ယၾတာျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ ပထမဆုံးေႂကြပန္ကန္ျပားထဲတြင္ေက်ာက္စရစ္ခဲ ၉ခဲဲကိုစုပီးထည့္ပါ ေက်ာက္စရစ္အေပါတြင္ဂ်င္းတက္တင္ပါ ေက်ာက္စရစ္ျမဳပ္သည့္ အထိေရကိုထည့္ပါ ဂ်င္းတက္ေပါတြင္ဖေယာင္းတိုင္းအစိမ္း ကိုထြန္းပီးဆုေတာင္းပါ ပိုပီးထိေရာက္၍အက်ိဳးျပဳပါလိမ့္မယ္ တပက္အတြင္းေငြေၾကးႏွင့္ပက္သက္ပီးအဆင္ေျပလာသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ကိုယ္ေတြ႕အသုံးျပဳပီး ျဖစ္သည္- ေအာက္တြင္ပုံႏွင့္တကြျပဳလုပ္ပုံကိုျပထားပါသည္
မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများဖြင့် အပင်များရှင်သန်လှပ ဖူးပွင့်စေသောနည်းများ
မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများဖြင့် အပင်များရှင်သန်လှပ ဖူးပွင့်စေသောနည်းများ ကြက်ဥခွံ နေလှန်းပြီးခြောက်သွေ့လာသော ဥခွံများကို အမှုန်ဖြစ်အောင် ထောင်းခြင်း၊ကြိတ်ခြင်းဖြင် အပင်ခြေရင်းတွင်ပုံပေးနိုင်ပါသည်။Calciumပမာဏများများပါဝင်ခြင်းက အပွင့်ပွင့်စေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ကြက်သွန်နီအခွံ ကြက်သွန်နီအခွံများကို ရေနှင့် 3ရက်ခန့်စိမ်ပြီးအရည်ကို အပင်လောင်းပေးပါက အအပင်အတွက်လိုအပ်သောအဟာရများစွာရရှိစေပါသည်။ ငှက်ပျောခွံ ငှက်ပျောခွံရေစိမ်ပြီး ရလာသောအရည်ကိုလောင်းတာဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြောက်လှမ်းပြီးရလာသောအခွံများကို အမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်အပင်များကို ကျွေးနိူင်ပါသည်။ အပင်အပွင့်အမြစ်ပါအကုန်အားရှိစေပြီး ရောဂါခံနိုင်ရည်လည်းမြင့်တက်စေပါသည်။(Potassium+Phosphorus+Nitrogen+Magbesium+Potash) နွားနို့ နွားနို့တွင် အပွင့်အားကောင်းစေသော Clacium ပါသည့်အတွက် ရေနှင့်ရောပြီး အပင်လောင်းနိုင်ပါသည်။နွားနို့ အချဉ်ပေါက်လာသောအကျိုးပြုများကလည်း အပင်ကို ရောဂါကာကွယ်ရာတွင် ကူညီပေးနိူင်ပါသည်။ ဆန်ဆေးရည် ဆန်ဆေးရည်တွင် ဘက်တီးရီးယားများကိုရှင်သန်ပေါက်ဖွားစေနိုင်သော လက်တစ်အက်ဆစ်ပါဝင်သည့်အတွက် အပင်များကို လောင်းပေးခြင်းဖြင့် အပင်သန်ခြင်းအပွင့်ပွင့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သကြား သကြားတစ်ဇွန်း ရေတစ်ခွက် ကိုရောပြီး ရလာသောသကြားရည်ကို အပင်ကိုလောင်းပေးခြင်းဖြင့် အပင် အထူးသဖြင့် အပွင့်တွေကို အားရှိစေပါသည်။ ရှောက်သီး_သံပရိုသီးအခွံ … Read more
စံပယ်၊နှင်းဆီ အပွင့်များများပွင့်အောင်စိုက်ပျိုးနည်း (1) နှင်းဆီအကြောင်း အလှပန်းအိုးနဲ့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေမှာချစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေဩဇာကို တစ်လတခါ တစ်လခွဲတခါ ပုံမှန်ကျွေးပေးရပါတယ်။ မြေဩဇာ ပုံမှန်ကျွေးမပေးလို့ အဖူး အပွင့်သေးသွားတယ် အပင် ထပ်ပြီး မကြီးထွားဘူး အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ အပွင့် အဖူးကြီးတယ် အပင်တွေသန်တယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ ဒီမှာ ကျွေးပေးထားတဲ့ ဓါတ်မြေဩဇာ အရှိန်နဲ့ပါ ဒီမှာက ၃ပတ် တခါ ၁လတ‌ခါလောက် အပင်တွေကို ဓါတ်မြေဩဇာ ‌ကျွေးပေးကြပါတယ်၊ ဓါတ်မြေဩဇာ အနေနဲ့က အာမို/နိုက်ထရိုဖော်စကာ 15:15:15 ကို သုံးပါတယ်) – နောက်တခုကအလှပန်းအိုးနဲ့ စိုက်တဲ့အခါမှာ နုန်း ဒါမှမဟုတ် မြေကြီးသက်သက်ချည်းပဲ ထည့်ရင်လည်း မြေကြပ်ပြီး အမြစ်ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အပွင့် အဖူးသေးတတ်ပါတယ်။ တခါတခါ အပင်တောင် သေသွားတတ်ပါတယ်။ … Read more
မြန်မာပြည်် အနိမ့်ပိုင်းတွေ ရေကြီးတော့မယ်ဟု သတိပေးနေတဲ့ ကြက််တူရွှေးကြီး ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ မသိသေးသူများ အတွက်သာ
မြန်မာပြည်် အနိမ့်ပိုင်းတွေ ရေကြီးတော့မယ်ဟု သတိပေးနေတဲ့ ကြက််တူရွှေးကြီး ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ မသိသေးသူများ အတွက်သာ သိိတဲ့သူများဖြေပါ….. ကြက်တူရွှေး ရေသောက်ဆင်းရင် ရေကြီးတော့မယ်လို့ ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်းမှာ ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ် ကြက်တူရွှေးရှိိတဲ့ဒေသက ဘယ်ဒေသမှာပါလည်း ။ဘယ်မြစ်ကျဉ်းမှာပါလည်း ယနေ့မြစ််ရေအခြေအနေသည် မိုးဇလထုတ်ပြန်ချက်အရ မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော် ကသာ ရွှေကူမြစ်ရေအခြေအနေသည် စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ရောက်ရှိရန်များစွာလိုနေပါသေးတယ်… မြစ်ကြီးနားအောက်မှာရှိိရင် ကြက်တူူရွှေးရေသောက်ဆင်းပြီဆိုတဲ့စကားသည် မဟုတ်မှန်နိုင်ပါဘူး မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်် ရွှေကူ ကသာ သင်္ဘောသားများ ရေလုပ်ငန်းသမားများ ဖြေကြားပေးပါရှင့်…06/07/2020 at 8:01pm (MMT) SU SU SAN ကြက်တူရွေး ရေသောက်ဆင်းပြီ။ သတိိထားကြပါ။ ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်ပါမယ် မြစ််ရေဝင်ဒေသများပြောင်းစရာရှိတာပြောင်းကြပါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါ ဧရာဝတီမြစ်ရေကိို ကြက်တူရွေး ရေသောက်ဆင်းပြီ ဆိုတော့ မြစ်ရဲ့ Down stream ရေဝင်ရပ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူများအနေနဲ့ … Read more